अष्ट्रेलियामा स्ट्रबेरीभित्र सियो आतंक फैलियो,बढि रुचाइने फलको बजार नै ध्वस्त - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलियामा स्ट्रबेरीभित्र सियो आतंक फैलियो,बढि रुचाइने फलको बजार नै ध्वस्त
अष्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको विभिन्न राज्यहरूमा स्ट्रबेरीमा सियो पाइएपछि मानिसहरू त्रासित भएका छन् । त्यहाँका विभिन्न ६ वटा राज्यहरूमा बेच्न राखिएको स्ट्रबेरीभित्र सियो भेटिएको हो । यसलाई त्यहाँका एक जना मन्त्रीले ‘जघन्य अपराध’ भनेका छन् । गत सातादेखि विभन्न राज्यमा स्ट्रबेरीभित्र सियो फेला पर्ने सिलसिला सुरु भएको हो । यसलाई ‘घातक अपराध’ को संज्ञा दिँदै सरकारले नाम चलेका केही ब्राण्डका स्ट्रबेरी बेचबिखनमा रोक लगायो र छानबिनको लागि प्रहरीलाई निर्देशन दियो ।
तर, प्रहरीले स्ट्रबेरीपछि केरा र स्याउमा पनि सियो फेला पारेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सिड्नीमा छुट्टाछुट्टै स्याउ र केरामा सियो भेटिएको हो । अष्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले जनमानसमा उत्पन्न भएको त्रास हटाउन देशको खाद्य नियामक निकायलाई घटनाको बारेमा छानबीन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गत सातादेखि अष्ट्रेलियाको ८ मध्ये ६ राज्यमा स्ट्रबेरीभित्र सियो भेटिएका थिए । प्रहरीका अनुसार न्यू साउथ वेल्स राज्यमा मात्रै २० भन्दा धेरै स्थानमा स्ट्रबेरीमा सियो भेटिएको घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
सबैभन्दा पहिले क्विन्सल्याण्ड राज्यमा यस्तो घटना बाहिर आएको थियो । एकजनालाई स्ट्रबेरी खाँदा सियो अड्किएपछि तुरुन्त अस्पतालमा लगिएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरुले यस कार्यमा एक जनाको मात्रै संलग्नता छ कि गिरोह नै छ भनेर भनेर छानबिन गरिरहेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले अष्ट्रेलियनहरुलाई स्ट्रबेरी काटेर मात्रै खान सुझाएका छन् । प्रहरीले यस कार्यमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म जेलमा राखिने चेतावनी दिएको छ ।
स्ट्रबेरी उद्योगलाई धक्का
स्ट्रबेरी आतंक भिक्टोरिया, अष्ट्रेलियाको राजधानी क्षेत्र, दक्षिण अष्ट्रेलिया, तास्मानिया र पश्चिमी अष्ट्रेलियामा फैलिएको छ । बिभिन्न नाम चालेका ब्राण्डका स्ट्रबेरीहरु बजारबाट फिर्ता पठाइएका छन् भने न्यूजिल्याण्डका ठूला ग्रोसरीहरुले पनि अष्ट्रेलियामा उत्पादित स्ट्रबेरीहरु बेच्न बन्द गरेका छन् ।
लभ बेरी, डोनीब्रुक बेरीज, बेरी अब्सेसन, बेरी लिसियस, डिलाइटफुल स्ट्रबेरी र ओसिस ब्राण्डका स्ट्रबेरी बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ । क्वीन्सल्याण्ड प्रहरीले स्ट्रबेरी उद्योगको जटिल आपूर्ति प्रणालीको कारण छानबिनमा ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । क्वीन्सल्यान्ड राज्य सरकारले भने अपराधीबारे जानकारी दिनेलाई १ लाख अष्ट्रेलियन डलर पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरिसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा एकदमै रुचाइने फल स्ट्रबेरीको मुल्यमा भारी गिरावट आएको छ । कारोबार धेरै हुने समयमा यसरी स्ट्रबेरीको बजारै ध्वस्त हुँदा उत्पादकहरु मात्रै नभई हजारौं कामदारहरुलाई समेत असर गरेको संघीय सरकारले जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा वार्षिक १३ करोड अष्ट्रेलियन डलर बराबरको स्ट्रबेरीको कारोबार हुने गर्छ ।
र्‍याफ्टिङ गर्दा डुबेर एक अष्ट्रेलियन नागरिकको मृत्यु
कर्णाली । कर्णाली नदीमा र्‍याफ्टिङ गर्दा डुबेर एक अष्ट्रेलियन नागरिकको मृत्यु भएको छ । शान्नित्रिवेणी […]
अस्ट्रेलियामा सजिलै पीआर पाइदैन, ठगहरुबाट कसरी बच्ने ? यी र यस्ता नामबाट टाढा बसौ
डा. समशेरसिंह थापा अस्ट्रेलियाका पहिलो नेपाली कानूनब्यबसायी हुन् । अस्ट्रेलियामा आप्रवासीहरुलाइ स्थायी […]
काठमाडौं । सिनेमा ‘जात्रै जात्रा’को अस्ट्रेलियामा बिक्री सम्झौता भएको छ । सिनेमाको छायांकन चलिरहँदा सिनेमाले […]